Tiirka farsamada © Copyright 2020-2021 LiFePO4 Power Technology Co. LTD
Hoyga > Wararka > Tiirka farsamada
Xerada suuqa safka hore ee batteriga korontada ku shaqeeya, Lithum wuxuu leeyahay erayo
Batarigii ugu horreeyay ee adduunka waxaa la ikhtiraacay 2,200 oo sano ka hor, sannadihii 1980-naadkiina warshadaha batteriga waxaa loo aqoonsanaa inay si qumman u bislaadeen oo aysan haysan meel badan oo ay ku koraan. Horumarinta sayniska iyo teknolojiyadda, baytariyaal cusub ayaa soo ifbaxay 20-kii sano ee la soo dhaafay. Marka loo barbardhigo batariyada dhaqameed, waxqabadka si weyn ayaa loo hagaajiyay. Heerka ka faa'iideysiga bateriga adduunka cusub ayaa ka sii sarreyn doona, horumarka waarana waa lagu doodayaa hadda.
Xanuunada Koraaya: Wadada Warshadaha Batariga ee Wadada loo balaarinayo
Marka dib loo jaleeco taariikhda horumarka aadanaha, waa in la yiraahdaa soo bixitaanka korontada ayaa u sahlay nolosha dadka isla markaana sare u qaaday horumarka bulshada. Kadib waxaa yimid batarigii. Si aan ugula wareegi karno qalabkan jikada wareega.
Lithum iron phosphate smart batteriga Bluetooth
Lithum iron phosphate smart Bluetooth battery wuxuu ku habboon yahay RV, markab, yacht, baabuur kaambo, baabuur golf, nidaamka kaydinta tamarta qorraxda ee guriga, nalalka wadada qorraxda, nidaamka kaydinta tamarta sawir qaadaha, iwm. , nolosheena iyo batterigeena waa kuwo isku dhow, haddii uusan batteri jirin, nolosheena way adagtahay in la qiyaaso, maanta waxaan ka hadli doonaa faa iidooyinka bateriga. Isticmaalka batteriga ilaha tamarta, waxaad ka heli kartaa danab xasilan, xasiloon , korontada xasilloon muddo dheer, saameyn yar oo dibedda ah, iyo qaab dhismeedka batteriga ayaa fudud, fudud in la qaado, amarka iyo soo saarista hawlgalku waa mid fudud oo fudud, oo aysan saameyn cimilada dibadda iyo heerkulka, xasiloonida iyo waxqabadka lagu kalsoonaan karo, isticmaalka ballaaran, cabirka qalabka korontada waa in la isticmaalo.
Haddii aysan jirin baytariyada nolosha
Batarigii ugu horreeyay ee adduunka oo la yiraahdo "Volt electric stack" waxaa la helay 1799 kii oo uu ahaa fiisikiiste Talyaani ah oo dhex galiyay saxanka zinc iyo saxan tin ah oo ku jira biyo cusbo leh wuxuuna ogaaday in koronto ku socota siligga isku xidha labada birood. Inta u dhexeysa go'yaasha zinc iyo qalinka, ka dib, wuxuu ku xardhay flannelette ama warqad lagu qooyay biyo milix ah, oo uu isku laabay. Markaad taabatid labada daraf ee gacanta, waxaad dareemi doontaa kicinta korantada oo xoog leh.
Teknolojiyadaha Lithum: Dhis shirkadda adduunka ugu horraysa ee bixisa tamar kale
Shenzhen Lithum Technology Co., LTD. Ma waxaa diirada la saaraa baakidhka lithium ion, xirmada batroolka lithium iron fosfate, baakad batari, xeedho, xeedho lithium ion, xeedho batari lithium iron fosfateer, UPS koronto siinta, inverter, guddiga ilaalinta korantada lithium, guddiga ilaalinta lithium iron fosfate iyo alaabooyin kale oo xirfadlayaal ah wax soo saarka iyo wax soo saarka shirkadda. Shenzhen Lithum Technology Co., LTD. Waxay leedahay nidaam maamul tayo leh oo dhameystiran. Shenzhen Lithum Technology Co., LTD. Sharci ahaantooda, xoogooda iyo tayada wax soo saarkooda ayaa lagu aqoonsaday warshadaha.
Miyay RV iyo Doomaha Baytariyada Lithium ay yihiin kuwo mudan in kor loo qaado?
RV baytariyada lithium waxay si aad ah caan ugu yihiin RVers maaddaama ay noqdaan kuwo aamin ah, waxtar badan, iyo maadaama qiimaha qiimuhu uu noqonayo caqabad yar. waxaan u soo saarnay Bluetooth APP noo gaar ah 12.8V 12V 50Ah, 100Ah, 120Ah, 150Ah, 200Ah, 300Ah, 400Ah, 500Ah, 1000Ah oo leh Nidaamka BMS-ka ee lagu ilaaliyo Ka badinta qarashka, dheecaanka, kan hadda, gaagaaban, ka badan heerkulka, heerkulka hoose ,, nolosha dheer, miisaanka fudud, cabirka yar.